Xog Qarsoodi ah: Maamulkii Tigrega Itoobiya oo liiska Jaajuusiinta u shaqeyn jiray oo la ogaaday - Latest News Updates
Xog Qarsoodi ah: Maamulkii Tigrega Itoobiya oo liiska Jaajuusiinta u shaqeyn jiray oo la ogaaday
XOG QARSOODI AH: Sirdoonka Ethiopia ayaa soo gudbiyay faylasha rag Soomaali ah oo Sirdoonka maamulkii Tigray-da u ahaa jaajuusiin mushaar iyo darajooyin kala duman ku qornaa. Ceebta ugu weyni waa in dadka liiska ku jira qaar badan ay xilal sare ka hayaan dowladda haatan jirta iyo dowlad goboleedyada. Liiska oo aad u dheer iyo xogtan oo qarsoodi ah aawadeed, waxaan idinla wadaagi doonaa shaqsiyaadka ugu darajada sareeya xagga darajoojinka ay sirdoonka Ethiopia uga qornaayeen.
1. Generaal Darwiish (Majeerteen/Biciidyahan) oo hadda ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa ah ninka ugu sareeya darajada jawaasiista Ethiopia ee Somalia joogta, waxaana uu Ethiopia ugu qoran yahay G/Sare.
2. General Fartaag (Mareexaan/Reer Diini) oo hadda ah xubin Aqalka Sare, isagana galkiisa laga helay xarunta Sirdoonka Ethiopia, waxaana ugu qoran G/Dhexe.
3. Hassan Hussein Eelay (Raxanweyn) oo hadda ah Wasiirka Amniga Koonfur Galbeed ayaa galkiisa laga helay Xarunta Sirdoonka Ethiopia, waxaana ku qoran Gaashaanle Dhexe.
4. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig (Ogaadeen/Cawlyahan), oo ah xubin Golaha Shacabka ayaa isna galkiisa laga helay xarunta Sirdoonka Ethiopia, waxaana u qoran G/Dhexe.
Dadka ku jira liiska laga helay Xarunta Sirdoonka Ethiopia, waxaa kaloo ka mid ah:
5. Cabdullaahi Sanbaloolshe (Xawaadle/Cali Madaxweyne), oo horey u ahaa Taliyaha Sirdoonka ayaa ku jira liiska ay Ethiopian-ku soo bandhigeen.
6.gen bashiir goobe (gabooye) Waxaa u qoran Gaashaanle. Wuxuu u shaqeynayey Itoobiya ilaa 2009
7. Cabdi Xoosh Jibriil (Leelkase), waxaa u qoran G/dhexe. Wuxuu u shaqeynayey Itoobiya ilaa 2005.
8. Xildhibaan Mahad Cawad (Dir/Surre), Gudoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka. Waxaa u qoran G/Sare. Wuxuu u shaqeynayey Itoobiya ilaa 2000.
9. Mudane Mustaf Dhuxulow (Murusade/Habar Ceeno). Waxaa u qoran Gaashaanle. Wuxuu shaqeynayey ilaa 2004.
10. Maxamuud Sayid Aadan (Mareexaan/Reer Xasan), Madaxweyne Ku xigeenka Jubaland. Waxaa u qoran G/Dhexe.
11. Cabdifitaax Geesey (Raxanweyn), Wasiirka Howlaha Guud ee Dowladda Soomaaliya. Waxaa u qoran Gaashaanle.
12. Xasan Dhaqane (wuxuu yahay lama yaqaan), oo ah nin muddo dheer iskii u deganaa Hotel Jazeera oo dad badan isweydiin jireen cida ka bixisa oo uu u shaqeeyo, laakiin xogta liiskan ayaa daboolka ka qaaday marxaladddiisa.